Gabiley-Cusbitaalka Dawlada Ku Magacaabay Oo laga Qaado Lacago Xad Dhaafa Hooyada Ku Umusha. |
Gabiley-Cusbitaalka Dawlada Ku Magacaabay Oo laga Qaado Lacago Xad Dhaafa Hooyada Ku Umusha.
Waa Kuma Cisbitaalka Ugu Qaalisan Cisbitaalada Dawlada Ee Dalka+Magaca Cisbitaalka Iyo Xaqiiqooyinka Dhabta Ahaa Ee Ku Geedaaman Guud Ahaan Hospitaalkaasi[Qalinkii Dr Nuoman]
Hospitalada dawlada ee dumarku ku umulaan ka ugu qaalisan lacagta ugu badan laga qaado waa Gabiley
Musuqmaasuqa adeegyada caafimaadka la galiyaa waxa uu kordhiyaa dhimashada hooyada iyo dhalaanka. Hospitalka gabiley bisha celcelis ahaan waxa ku umula (Normal delivery) 200 dumara, midwalba waxa laga qadaa $$30dollar, lacagta guud ee ka soo xeroota bisha waa $600dollar.
Sida oo kale celcelis ahaan dumarka qaliinka ku umula halka bil hospitalka gabiley waa 20dumara, waxa midkiiba laga qadaa $350dollar total lacagta bisha ka soo xerootaa waa $700dollar
Waxa kale hospitalka gabiley lee yahey 10qol oo kiro ah, 24saac waxa lagu kireyaa $10dollar, inta badana lama kala helo, oo waa la iska daba sugaa qolal sobabta oo ah, waxa la dhigaa dumarka qalinka .
10qol ee kirada ah waxa halka habeen ka soo xerooda $100dollar, hadaan ka soo qaadno in 15habeen oo kamida bisha in la kireystey waxa bisha ka soo baxaya $1500dollar.
Cadadka lacagta bisha uu soo saaro waadhka umulaha & qolalka mirada hospitalka gabiley marka la isku wadageeyo waa $14500dollar,
Waxa kale oo jira #18million somaliland shilling ayey dawlada dhexe sadex biloodle ubixisaa iyo halka dawlada hoose gabiley lacag kale taagero ah usii deyso, si la mida dawladaha hoose magaalooyinka kale ee somaliland.
Pharmacy & sheybaadka iyo qaliinada kale & kharashka kale ay haayadaha ku bixiyaan idinka ayaan idiin dhaafey xisaabtooda?
Waxa aan barbar dhid ku sameyneysa kharasha laga qaado hospitalada Burco, Hargeysa & Gabiley.
Dumarka ku umula #hospitalka_Burco qalinka gala waxa laga qadaa $120dollar. Halka dumarka caadiga u umula laga qaado Normal delivery $20dollar, sida oo kale wax haayada oo caawisa waadhka umulaha ma jirto.
Dumarka ku umula hospitalka Gabiley ee qaliinka lagaga umuliyo waxa laga qadaa $350. Halka dumarka caadiga u umula laga qaado $30dollar. Halka ay haayada UNFPA waadhka umulaha qacanta ku heyso, bixisana dhamaan kharashka waadhka umulaha sida mushaar ka iyo dawada.
Dumarka ku umula #Hargeisa_group #hospital qaliinka gala waxa laga qadaa $50dollar. Sida oo kale dumarka caadiga u umula (Normal delivery) aan wax lacaga laga qaadin, #free_services,
Xogtan isbarbar dhiga lacagta laga qaado dumarka labada hospital ee gabiley & Hargeysa group hospital ku umulaya waxa aan ka helney qaar ka mida shaqaalaha ka hawl gala labada hospital.
Xaga hoose waxa idinka muuqda mid ka mida dumarka ku umuley (SC) hospitalka gabiley oo laga qaadey $300dollar, Budcadnimada hospitalka gabiley ka jirtaa waxa weeyi #Warqada_Bayaad cad ayaa lacagta dadka lagaga gurtaa oo shaabada hospitalka lagu dhuftey maanta xata hadii loo baahda in la xisaabiyo wax documents saxa ma jiro hospital gabiley.
#Baniga_dhiiga lagu shubo (Blood Bank) malaha hospitalka gabiley dumarka bilaa dhiiga wax lagu badbaadiyaa ma jirto waxana suurta gala iney dumar badan dhiig la aan u dhintaan wakhtiga dhalmada
Gobalnimo, laameyo afar haada, labrery la dhisaa maxey soo kordhinayaa hadey wali dumarka umalayaan bilaa dhiig udhimanayan. Hospitalka gabiley.
Sobabo jira awgeed ayaan xogta qofka qeybo ka mida la qariney. Documents xaga hoose idiinka muuqda.
Qeybta sadexaad la soco __